Ramaax iyo Reer Gabiley
Tuesday January 30, 2018 - 10:57:00 in Maqaallo by Reporter Burco
Waad salaamantiin Shaqaale waynaha QorilugudNews Ee Mar walba wararka xaqiiqada ah bulshada usoo tabiya. Intaasi kaddib, waxan hambalyo iyo ducaba halkan uga dirayaa; mudane Maxamuud Cali Sulaymaan (Ramaax) oo loo magacaabay,
Waad salaamantiin Shaqaale waynaha QorilugudNews Ee Mar walba wararka xaqiiqada ah bulshada usoo tabiya. Intaasi kaddib, waxan hambalyo iyo ducaba halkan uga dirayaa; mudane Maxamuud Cali Sulaymaan (Ramaax) oo loo magacaabay, guddoomiyaha gobol Gabiley. Waxa kale oo aannu reer Gabiley ahaan salaan iyo sagootiba iskugu daraynaa, badhasaabkii hore ee gobolka Gabiley; mudane Xamse oo gobolka si sharaf lehna ku yimid - si sharaf lehna kaga tegey.
Mudane, guddoomiye Ramaax; gobolka Gabiley illaa 1970 naadkii wuxu lahaa welina leeyahay, qadiyadda ah: raadinta gobolnimo buuxda. Illaa iyo haatanna guddoomiye gobolnimadaasi buuxda soo dhiciya waa la laayahay! Tolow, kaasi adiga ma yahay?
Haddaba, waxa maanta tijaabo geleysa raganimadii Ramaax ee Rabiyoow ku astur. Aaamiin
Maxamuud, Gabiley wax gobolnimo buuxa ka yar kaagama fadhidu ee taasi hiyigaaga iyo haabkaagaba geli.
Haddii kale, waxa kuu taalla tixdii Axmed Ismaaciil Diiriye (Qaasim) - Eebbe ha u naxariistee- ee uu ka midka ahaa tuducani:
" Daab gudumo weli soo ma jarin
Waxay reer Gabiley ku rajeynayaan gobonimo iyo gobolnima buuxda!